Sharing/Accessing files between Window and Ubuntu — MYSTERY ZILLION
Sharing/Accessing files between Window and Ubuntu
သင်ရဲ့စက်တစ်လုံးထဲမှာပဲ Window ရောUbuntu ပါ တင်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ Ubuntu ကနေပြီး Window မှာရှိတဲ့ mp3 သီချင်းဖွင့်ချင်၊ Window မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို access လုပ်ချင်တယ်ထားဗျာ။ ubuntu မှာ download လုပ်လို့ရလာတဲ့ file တွေကို window ကနေ access လုပ်မယ်ထားဗျာ။ ဘယ့်နှယ် လုပ်မတုံး။ ဟိုဘက်ဒီဘက် အပြန်အလှန် file access လုပ်ချင်တယ်ဗျာ။ ကျနော်က လက်ရှိ partition ခွဲပြီး window နဲ့ ubuntu သုံးတာမဟုတ်ဘူး။ Wubi သုံးပြီး ubuntu တင်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတာ တဆိတ်လောက်...
Windows ---> Ubuntu
Ubuntu ---> Windwos
Windows ဖိုင်တွေကို Ubuntu ထဲကနေ ယူသုံးတာ လွယ်ပါတယ်။ /host ပါ။ /host ဆိုတာ Windows Partition ကိုပြောတာပါ။
Ubuntu ထဲကဖိုင်တွေကို Windows က နေယူသုံးဖို့ကတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုလုပ်ပါတယ်။ Windows မှာ C: partition နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီး C: အောက်မှာ Windows ရော Ubuntu ( Wubi သုံးပြီး ) ရော တင်ပါတယ်။ အောက်မှာကျတော့ ဒေတာချည်းပဲ သိမ်းပါတယ်။
( အဲတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် OS Crash ဖြစ်လို့ မတက်ရင်တောင် ဒေတာတွေက တစ်ခြား ပါတေးရှင်းမှာရှိလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ စကားချပ်ပါ။ )
ခုနက Ubuntu ထဲက ဒေတာတွေကို Windows ထဲကနေ access လုပ်ချင်ရင် အောက်မှာပဲ ရှိလို့ access လုပ်လို့ရပါတယ်။ ( Ubuntu မှာ ဒေါင်းသမျှကိုလည်း အောက်မှာပဲ သိမ်းလေ။ ဒီပြင်နေရာမှာ မသိမ်းနဲ့ )
opengun ပြောတာတွေ့ပါပြီ။ /host ထဲက file တွေကို access လုပ်လို့ရပါပြီ။ ဆက်ပြီး လေ့လာလိုက်ဦးမယ်။
ဒီကို လာခဲ့ပါလား။ Linux ချစ်သူတွေ စုဝေးတဲ့နေရာ။ POSIX Group။
အဲဒီလို partation2ခုဘဲခွဲပြီး OS 2ခုလုံးကို တခုထဲမှာထားတာကောင်းလား || chart ထဲကလိုမျိုးကပိုကောင်းလား
အဲဒါက ကိုယ့်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်က testing environment၊ ဒါမှမဟုတ် အခုမှ Linux စသုံးမယ့်သူဆိုရင် Wubi လေးနဲ့ OS နှစ်ခုလုံးကို Partition တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်က Wubi သုံးပြီး Linux ကို Windows အောက်မှာ သွင်းထားတဲ့အတွက် Windows အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ Crash ဖြစ်လို့ Windows မတက်တော့ရင် Linux ပါ တက်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒါဆိုးပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Windows က မတက်ရင် ကိုယ့် Linux လေးက သွားရော။
နောက်တစ်ခုက Wubi သုံးထားတဲ့အတွက် Linux ထဲက ဖိုင်တွေကို Boot CD သုံးပြီး access လုပ်လို့မရခြင်းပါပဲ။ အရေးအကြောင်း data ဆယ်ချင်ရင် ဆယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ သူက Windows အောက်မှာ Ubuntu ဆိုတဲ့ folder လေးပဲ ရှိပြီး အဲဒီအောက်မှာ Disk ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ Disk က Wubi နဲ့ချိတ်ထားပြီး Wubi က ပဲ ဆွဲဆွဲတင်နေတာပါ။ Live CD တွေက အဲဒီ Disk folder ကို မဖတ်နိုင်ပါ။ အဲဒီ အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။
ကိုယ်က တကယ့် working area၊ Criticial သုံးနေမယ်ဆိုရင် သီးသန့်ပါတေးရှင်းနဲ့ တင်ကို တင်ရပါမယ်။ အမှားမခံပါဘူး။
ဒါမှမဟုတ်ပဲ စ သုံးနေတယ်၊ စမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ Wubi လေးနဲ့သာ စသုံးပါဗျို့။ Linux installation နဲ့ file system တွေက အခုမှစလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းလေး မျက်စိလည်တတ်လို့ပါ။
OK i will start with wubi .
အရေးအကြောင်း data ဆယ်ချင်ရင် ဆယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ သူက Windows အောက်မှာ Ubuntu ဆိုတဲ့ folder လေးပဲ ရှိပြီး အဲဒီအောက်မှာ Disk ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ Disk က Wubi နဲ့ချိတ်ထားပြီး Wubi က ပဲ ဆွဲဆွဲတင်နေတာပါ။
disk ထဲက data တွေဆိုဒါဘာကိုပြောဒါလဲဟင်? ubuntuသုံးရင်း download လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ...data တွေကို ကိုကြိုက်တဲနေရာမှာsave ပြီး/ အဲဒီ data ကို ဘယ် OS ဘဲသုံးသုံး ပြန် access လုပ် လို့ မရဘူးလား?
Linux installation နဲ့ file system တွေက အခုမှစလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းလေး မျက်စိလည်တတ်လို့ပါ။
ဟုတ်ပ အဲဒီလို install စလုပ်တော့မှ ဒုတ်ခများမှာဆိုး လို့ မစခင်ကဒဲကသေချာအောင်လုပ်နေရဒယ်...
anyway, linux ကိုဒေါ့သုံးဘူးဒယ်ရှိအောင်သုံးရမယ် ဟဲဟဲ
အော် . . . ပြောတာ လော သွားလို့ သေချာမပြောလိုက်ရတာပါ။ ဒီလိုပါ။
Wubi ဆိုတာ အင်စတော်လေးရှင်းလွယ်အောင် လုပ်ပေးတာပါ။ အဲတော့ Wubi နဲ့ အင်စတော်ရင် တကယ့်ပါတေးရှင်းမှာ Wubi ဖတ်နိုင်တဲ့ virtual ပါတေးရှင်းနဲ့ သိမ်းတာပါ။အဲဒါကိုပြောတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်က Windows အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Windows crash ဖြစ်တယ်။ Windows မတက်တော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် Linux လည်းသွားပြီ။
ပုံမှန်အားဖြင့် အဲလိုအခြေအနေမှာ Linux Live CD တွေကိုသုံးပြီး dataတွေကို ဆယ်လို့ရပါတယ်။
Wubi နဲ့အင်စတောထားရင်တော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။
Linux Live CD က Wubi ရဲ့ virtual ပါတေးရှင်းကို မဖတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲတော့ ဘယ်လိုဒေတာသွားဆယ်မလဲ။အဲဒါကိုပြောတာပါ။
ubuntuသုံးရင်း download လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ...data တွေကို ကိုကြိုက်တဲနေရာမှာsave ပြီး/ အဲဒီ data ကို ဘယ် OS ဘဲသုံးသုံး ပြန် access လုပ် လို့ မရဘူးလား?
အပေါ်မှာ ပြောထားပါတယ်။ ဒုတိယ post မှာပါ။